Aha Chineke—Otú E Si Eji Ya Eme Ihe na Ihe Ọ Pụtara - Naanị Ebe A Ka Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n'Ịntanet
Ndị sụgharịrị Bible hiere nnọọ ụzọ n’iji utu aha dochie aha Chineke. Ha mere ka o yie ka ọ̀ bụ na Chineke abụghị onye nakwa na a pụghị ịbịaru ya nso, ebe ọ bụkwanụ na Bible na-agba ndị mmadụ ume iso Jehova “na-enwe mmekọrịta chiri anya.” (Abụ Ọma 25:14, NW ) Cheedị banyere otu ezigbo enyi gị. Oleedị otú unu ga-esi nwee mmekọrịta chiri anya ma ọ bụrụ na ị maghị aha enyi gị? N’otu aka ahụ, ọ bụrụ na ndị mmadụ amaghị aha Chineke, bụ́ Jehova, olee otú ha pụrụ isi bịaruo Chineke nso n’ezie? Ọzọkwa, ọ bụrụ na ndị mmadụ adịghị eji aha Chineke eme ihe, ha agaghịkwa ama ihe dị ebube aha ahụ pụtara. Gịnị ka aha Chineke pụtara?
Chineke n’onwe ya kọwaara ohu ya kwesịrị ntụkwasị obi, bụ́ Mozis, ihe aha ya pụtara. Mgbe Mozis jụrụ Chineke aha ya, Jehova zara ya, sị: “M ga-abụ ihe m chọrọ ịbụ.” (Ọpụpụ 3:14, NW ) Ná nsụgharị Rotherham, e si otú a sụgharịa okwu ndị a: “M Ga-aghọ ihe ọ bụla masịrị m.” N’ihi ya, Jehova pụrụ ịghọ ihe ọ bụla dị mkpa iji mezuo nzube ya.
N’ụzọ doro anya, aha ahụ bụ́ Jehova kwesịrị ịdị n’ime Bible. Ịmata ihe ọ pụtara na iji ya na-eme ihe mgbe nile n’ofufe anyị, ga-enyere anyị nnọọ aka ịbịaru Nna anyị nke eluigwe, bụ́ Jehova, nso.*
* Iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere aha Chineke, ihe ọ pụtara, na ihe ndị mere e ji kwesị iji ya na-eme ihe n’ofufe, lee broshuọ bụ́ Aha Nsọ Ahụ Nke Ga-adịru Ebighị Ebi, bụ́ nke Ndịàmà Jehova bipụtara.